The zuru oke Mbido si Nduzi Google Analytics - China Litbright kandụl (shijiazhuang)
Ọ bụrụ na ị na-amaghị ihe Google Analytics bụ, wụnye ya na gị na website, ma ọ bụ arụnyere na ya ma ọ dịghị mgbe anya na gị data, mgbe ahụ, a na post bụ maka gị. Mgbe ọ bụ ike n'ihi na ọtụtụ kwere, e nwere ndị ka nrụọrụ weebụ na-adịghị eji Google Analytics (ma ọ bụ ọ bụla nchịkọta, n'ihi na nke ahụ) tụọ ha okporo ụzọ. Na nke a post, anyị na-aga ele anya na Google Analytics si zuru mbido na-ekwu echiche. Gịnị mere na ị chọrọ ya, ga-esi ya, otú iji ya, na ọrụ gburugburu na nkịtị nsogbu.
Gịnị mere ọ bụla website nwe kwesịrị Google Analytics
Ị nwere a blog? Ị nwere a static website? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, ma ha bụ ndị ihe onwe onye ma ọ bụ azụmahịa were, mgbe ahụ, gị mkpa Google Analytics. Ndị a bụ nanị ole na ole n'ime ọtụtụ ajụjụ banyere gị website na ị pụrụ ịza eji Google Analytics.
Olee otú ọtụtụ ndị gara m website?
Ebee ka m ọbịa na-ebi ndụ?
Ọ dị m mkpa a mobile-enyi na enyi website?
Gịnị weebụsaịtị eziga okporo ụzọ m website?
Gịnị ahịa si eme ụgbọala ndị kasị okporo ụzọ m website?
Nke peeji nke na m website ndị kasị ewu ewu?
Olee otú ọtụtụ ndị ọbịa m converted n'ime edu ma ọ bụ ndị ahịa?
Olee ebe m n'ịtụgharị ọbịa na-abịa site na-aga na m website?
Olee otú m pụrụ isi meziwanye m website na-agba?
Gịnị blog ọdịnaya eme m ọbịa dị ka ndị kasị?
E nwere ọtụtụ ndị, ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ na Google Analytics nwere ike ịza, ma ndị a bụ ndị na-na-kasị mkpa n'ihi na ọtụtụ website nwe. Ugbu a, ka na-ele otú i nwere ike inwe Google Analytics gị website.
Olee otú iji wụnye Google Analytics
Akpa, ị chọrọ a Google Analytics na akaụntụ. Ọ bụrụ na ị nwere a bụ isi Google akaụntụ na ị na-eji maka ọrụ ndị ọzọ dị ka Gmail, Google Draịvụ, Google Kalinda, Google+, ma ọ bụ YouTube, mgbe ahụ i kwesịrị melite gị Google Analytics-eji na Google akaụntụ. Ma ọ bụ ị ga-mkpa ike ọhụrụ otu.
Nke a kwesịrị a Google akaụntụ ị na-eme atụmatụ na-ruo mgbe ebighị ebi na na na ị nwere ohere. Ị nwere ike mgbe niile nye ohere gị Google Analytics ndị ọzọ ala n'okporo ụzọ, ma ị na-achọghị onye ọzọ nwere akara n'elu ya.
Big n'ọnụ: ka ọ ghara gị na onye ọ bụla (weebụ gị mmebe, web Mmepụta, web usu, SEO onye, ​​wdg) ike gị website nke Google Analytics akaụntụ n'okpuru ha onwe ha Google akaụntụ otú ha nwere ike "jikwaa" ya n'ihi na ị. Ọ bụrụ na ị na onye a akụkụ ụzọ, ha ga-gị Google Analytics data na ha, na ị ga-amalite nile.
Melite akaụntụ gị na ihe onwunwe
Ozugbo i nwere a Google akaụntụ, i nwere ike gaa Google Analytics na pịa Sign n'ime Google Analytics button. Ị ga-ahụ ga-kelee na atọ usoro ị ga na-ewe iji melite Google Analytics.
Mgbe ị pịa Sign Up button, ị ga-dejupụta ozi maka gị website.
Google Analytics awade hierarchies hazie akaụntụ gị. Ị nwere ike ruo 100 Google Analytics akụkọ n'okpuru otu Google akaụntụ. Ị nwere ike ruo 50 website Njirimara n'okpuru otu Google Analytics na akaụntụ. Ị nwere ike ruo 25 echiche n'okpuru otu website onwunwe.
Ebe a na-a ole na ole ndapụta.
Dịruru ná njọ 1: Ọ bụrụ na i nwere otu website, gị na mkpa otu Google Analytics na akaụntụ na otu website onwunwe.
Dịruru ná njọ 2: Ọ bụrụ na i nwere abụọ weebụsaịtị, dị ka otu maka azụmahịa gị, otu maka gị onwe onye ojiji, ị pụrụ iji ike ndekọ abụọ, na-akpọ "onye 123Business" na otu "Personal". Mgbe ahụ ị ga-eme ka azụmahịa gị website n'okpuru 123Business akaụntụ na gị onwe onye website n'okpuru gị Personal akaụntụ.
Dịruru ná njọ 3: Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ulo oru, ma ihe na-erughị 50, na onye ọ bụla n'ime ha nwere otu website, ị pụrụ iji na-etinye ha niile n'okpuru a Business akaụntụ. Mgbe ahụ nwere a Personal na akaụntụ maka gị onwe onye weebụsaịtị.
Dịruru ná njọ 4: Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ulo oru na nke ọ bụla n'ime ha nwere ọtụtụ nke weebụsaịtị, maka a ngụkọta nke ihe karịrị 50 weebụsaịtị, ị pụrụ iji tinye kwa azụmahịa n'okpuru ya na akaụntụ, dị ka 123Business akaụntụ, 124Business akaụntụ, na na.
E nweghị ndị na nri ma ọ bụ na-ezighị ezi ụzọ melite gị Google Analytics na akaụntụ-ọ bụ nnọọ a okwu nke otú ị chọrọ hazie gị na saịtị. Ị nwere ike mgbe niile ịnyegharị gị akaụntụ ma ọ bụ Njirimara ala n'okporo ụzọ. Rịba ama na ị na-enweghị ike ime a onwunwe (website) site na otu Google Analytics akaụntụ ọzọ-ị ga-eme ka otu ọhụrụ onwunwe n'okpuru akaụntụ ọhụrụ ma hapụ ndị mere eme na data gị anakọtara site na mbụ onwunwe.
N'ihi na zuru mbido ji ndu, anyị na-aga iche i nwere otu website na na mkpa onye na-ele (ndabara, niile data ele. The ntọlite ​​ga-ele anya ihe dị ka nke a.
N'okpuru nke a, ị ga-nhọrọ hazi ebe gị Google Analytics data nwere ike na-akọrọ.
Wụnye gị nsuso koodu
Ozugbo ị na-okokụre, ị ga-pịa Nweta Ndepụta ID button. Ị ga-enweta a popup nke Google Analytics usoro na ọnọdụ, nke na ị ga-ekweta na-. Mgbe ahụ ị ga-esi na gị Google Analytics koodu.
Nke a ga-arụnyere na bụla page gị website. The echichi ga-adabere na ihe ụdị website i nwere. Ihe atụ, m nwere a WordPress website na m domain iji Genesis Framework. Nke a kpuchie nwere a kpọmkwem ebe ịgbakwunye nkụnye eji isi mee na n'okpuru scripts m website.
Nhọrọ, ma ọ bụrụ na i nwere a WordPress na gị onwe gị na ngalaba, i nwere ike iji Google Analytics site Yoast plugin iji wụnye gị koodu mfe n'agbanyeghị ihe isiokwu ma ọ bụ kpuchie ị na-eji.
Ọ bụrụ na ị nwere a website wuru na HTML faịlụ, ị ga-ịgbakwunye nsuso code tupu </ isi> mkpado na onye ọ bụla nke gị na peeji nke. I nwere ike ime nke a site na iji a ederede nchịkọta akụkọ usoro (dị ka TextEdit maka Mac ma ọ bụ Notepad maka Windows) mgbe na-ebugote na faịlụ gị web usu-eji ihe FTP usoro (dị asFileZilla).
Ọ bụrụ na ị nwere a Shopify e-azụmahịa ụlọ ahịa, ị ga-aga gị Online Store ntọala na mado gị nsuso koodu ebe kpọmkwem.
Ọ bụrụ na ị nwere a blog on Tumblr, ị ga na-aga gị blog, pịa Dezie Okwu button na n'elu aka nri gị blog, na ibà nnọọ Google Analytics ID na mwube gị.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na echichi nke Google Analytics dịgasị dabeere na n'elu ikpo okwu na ị na-eji (ọdịnaya management usoro, website-ewu, e-azụmahịa software, wdg), isiokwu ị na-eji, na plugins ị na-eji. Ị ga-enwe ike ịchọta mfe ntuziaka nwụnye Google Analytics ọ bụla website site na-eme a web search gị n'elu ikpo okwu + otú nwụnye Google Analytics.
Melite mgbaru ọsọ
Mgbe ị rụnyere gị nsuso koodu gị website, ị ga-achọ hazi a obere (ma nnọọ uru) mwube gị website na profaịlụ na Google Analytics. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ gị ọnọdụ. Ị nwere ike ịchọta ya site na ịpị na Admin njikọ na n'elu gị Google Analytics na mgbe ahụ na ịpị on Goals n'okpuru gị website si View kọlụm.
Mgbaru ọsọ ga-agwa Google Analytics mgbe ihe dị mkpa mere na gị na website. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị nwere a website ebe ị n'ịwa edu site a na kọntaktị ụdị, ị ga-achọ ịhụ (ma ọ bụ mepụta) a na-ekele gị na peeji nke ọbịa kwụsị n'elu ozugbo ha rubere ha kọntaktị. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị nwere a website ebe ị na-ere ngwaahịa, ị ga-achọ ịhụ (ma ọ bụ mepụta) a ikpeazụ na-ekele gị ma ọ bụ nkwenye page maka ọbịa n'ala n'elu ozugbo ha dechara a zụọ.